Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny fanambadiana ao am-piangonana? | Bezzia
Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny fanambadiana ao am-piangonana?
Maria vazquez | 06/10/2021 10:00 | fampakaram-bady
Ny iray amin'ireo fanapahan-kevitra voalohany tsy maintsy raisin'ny mpivady te hanambady dia ny momba ny karazana fampakaram-bady tadiaviny, sivily na ara-pinoana? Raha samy nanapa-kevitra ianao sy ilay namanao manambady ara-pivavahana Eo ambanin'ny fitsipiky ny fiangonana katolika dia hisy fepetra takiana tsy maintsy hataonao.
Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny fanambadiana ao am-piangonana ireo? Ny tena lehibe dia ny mankany amin'ny paroasinao mba hahalalanao izay karazana antontan-taratasy tokony hataterinao alohan'ny hankalazana ny fampakaram-bady. Raha vantany vao nihaona tamin'ny pretra paroasy ianao dia tsy maintsy maka vady alohan'ny fanambadiana ary angony ny antontan-taratasy ilaina ho an'ny fanokafana ny fisie matrimonial.
1 Jereo ao amin'ny paroasinao
2 Raiso ny lalana alohan'ny fanambadiana
3 Misafidiana vavolombelona roa hanonona teny
4 Angony ny antontan-taratasinao
Jereo ao amin'ny paroasinao
Nanapa-kevitra ny hanambady ao am-piangonana ve ianao? Ny dingana voalohany dia ny mankanesa any amin'ny paroasy izay tianao hanambadiana herintaona farafahakeliny mialoha mba hampahafantatra anao ny zavatra takiana sy Tehirizo ny daty hanaovana ilay rohy.
Hampahafantatra anao roa ireo ny pretra paroasy antontan-taratasy izay tokony hatolotrao Alohan'ny hankalazana ny mariazinao ara-pinoana katolika, ary koa ny kalandrie ny fampianarana alohan'ny fanambadiana izay tsy maintsy hataonao sy ny filàna fanatanterahana volana vitsivitsy alohan'ny fampakaram-bady ny fanaovana teny miaraka amin'ny vavolombelona roa.
Raiso ny lalana alohan'ny fanambadiana
Anisan'ny fepetra takiana ny manambady ao am-piangonana. Izy ireo dia misy andian-dahatsoratra izay ahitana taratra ny fianakaviana sy ny fiainana miaraka, mijanona amin'ny olana mety hitranga, ny famahana ny fifanolanana ary ny foto-kevitra ara-Baiboly sasany ary ny fitsipiky ny fiangonana momba ny fanambadiana sy ny firaisana ara-nofo.
Fotoam-pivorian'ny vondrona matetika ny fivoriana mifanatrika, mihaona amin'izy ireo ny mpivady samihafa liana amin'ny fanambadiana sy ny pretra paroasy. Izy ireo dia azo atao amin'ny paroasy rehetra ary na amin'ny Internet aza raha sendra tsy afaka manatrika mivantana ireo mpikambana ao amin'ny mpivady. Tsy ny fiangonana rehetra no manolotra azy ireo fa mihamaro hatrany no miloka amin'izy ireo online courses ho solony.
Rahoviana no tokony hatao izy ireo? Matetika dia mandany fotoam-pivoriana marobe izy ireo, noho izany ny tanjona tsara indrindra dia ny maka ny lalam-panambadiana enim-bolana alohan'ny fanambadiana mba tsy hampihenjana bebe kokoa noho ny tokony hataonao rehefa manakaiky ny daty.
Misafidiana vavolombelona roa hanonona teny
Ny fepetra iray hafa hanambadiana ao am-piangonana dia ny fanaovana teny, fomba izay andraisan'ny mpivady sy ny mpivady anjara anjara. vavolombelona roa, ny iray misolo tena ny mpikambana ao amin'ny mpivady. Ireo vavolombelona ireo dia tsy maintsy mahafeno andiana fepetra takiana: tokony ho vanim-potoana ara-dalàna fa tsy hifandraisan'ny rà amin'ireo antoko nifaninana. Tsy afaka ny ho mpianakavy izy ireo, fa tsy maintsy mahafantatra lalina ny ho avy vady.
Ireo vavolombelona dia ho tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana, hamaly ireo andiana fanontaniana napetraky ny pretra paroasy, fa manambady malalaka ianao ary tsy misy sakantsakana hanao izany. Ny pretra paroasy no hanondro daty an'ity fivoriana ity, izay matetika atao roa na telo volana alohan'ny mariazy.
Angony ny antontan-taratasinao
Ny pretra ao amin'ny paroasy no hampahafantatra anao ny andiany antontan-taratasy fototra izay tsy maintsy hatolonao hanokafana ny antontan-taratasim-panambadiana, saingy efa fantatray fa ny takiana amin'ny fampakaram-bady katolika dia mitovy amin'ny diosezy espaniola samihafa. Mila:
Kopian'ny DNI, karatra pasipaoro na fonenana an'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny mpivady.
Photocopy an'ny Bokim-pianakaviana ny an'ny ray aman-dreny izay misy ny anaranao voasoratra.
tamin'ny batisa amin'ny mpivady roa. Tsy maintsy mangataka izany any amin'ny paroasy nanaovana batemy anao ianao, manome ny anaranao, ny anaranao ary ny taona nanaovana batisa anao.
Taratasy nahaterahana ara-bakiteny ny mpivady vao. Izany dia angatahina ao amin'ny Registra sivily amin'ny tanàna nahaterahana, amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny fanendrena.
Fanamarihana momba ny finoana sy ny toerana misy azy. Izany dia angatahina ao amin'ny rejisitra sivily sivily sivily mifanaraka amin'ny adiresy mahazatra anao, amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny fanendrena anao.
Raiso ny teny.
Fanamarinana momba ny fampianarana alohan'ny fanambadiana.
Raha toa ka maty vady ny iray amin'ireo vady nanambady taloha, Ny taratasy fanamarinana ara-panambadiana sy ny taratasim-pahafatesan'ny vady dia hangatahina ihany koa amin'ny tranga voalohany ary ny taratasy fisaraham-panambadiana amin'ny faharoa.
Eken'ny fanjakana Espaniola ho ara-dalàna ny fanambadiana kanônika, noho izany dia tsy mila mankalaza ny fanambadiana ianao any amin'ny Registra sivily na any amin'ny fitsarana. Raha manana kosa ianao, dia tokony hanana ny taratasy fanamarinana ara-panjakana sy ny kopia-bokiny mora ampiasaina.
Fantatrao izao ny fepetra takiana alohan'ny a fampakaram-bady tonga lafatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » fampakaram-bady » Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny fanambadiana ao am-piangonana?
Saron-tava kôkômbra no tokony andramanao
Torohevitra hisarahana amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny vadinao